एनआईसी बैंकद्धारा १०.५२६ प्रतिशत लाभांश घोषणा | My News Nepal
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लागि प्रति शेयर रु. १० (१० प्रतिशत) शेयर लाभांश तथा उक्त शेयर लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि प्रति शेयर रु. ०.५२६ (०.५२६) नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको कार्तिक ३० गते बसेको ३७७ औं सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
उक्त लाभांश नेपाल राट्र बैंकको स्वीकृती तथा बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारीत भएपश्चात मात्र शेयरधनी महानूभावहरुलाई बितरण गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा वार्षिक विन्दूगत आधारमा कर्जा तथा सापटीतर्फ रु. ४८ अर्ब (६७ प्रतिशत) ले वृद्धि गरी रु. १२० अर्ब तथा निक्षेप तर्फ रु. ६४ अर्ब (७३ प्रतिशत) ले वृद्धि गरी रु. १५२ अर्ब संकलन गरेको छ ।
त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वार्षिक विन्दूगत आधारमा कर्जा तथाको पहिलो त्रैमाससम्ममा कर्जा तथा सापटीतर्फ वार्षिक विन्दूगत आधारमा ६१ प्रतिशत (रु. ५३ अर्ब) ले वृद्धि गरी रु. १३९ अर्ब तथा कूल निक्षेप संकलनमा ५८ प्रतिशत (रु.६० अर्ब) ले वृद्धि गरी रु. १६३ अर्ब गर्न सफल भएको छ । साथै, खूद मूनाफामा १७० प्रतिशत (रु. ४७ करोड) ले वृद्धि गरी रु. ७५ करोड ५३ लाख आर्जन गरेको छ । बैंकको प्रति शेयर आम्दानी रु. ३६.७८ रहेको छ ।
बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जालमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ११२ वटा नयाँ शाखा थप गरी कूल २३१ शाखा सञ्जाल, एटिएमतर्फ १५० नयाँ थप गरी कूल २२० एटिएम, एक्सटेन्सन काउन्टर तर्फ १० वटा एक्सटेन्सन काउन्टर थप गरी कूल १४ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा १५ नयाँ शाखा रहित बैंकिङ थप गरेको छ । हाल बैंकले नेपालभर २६५ वटा शाखा सञ्जाल, २६९ एटिम, ३७ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा १८ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।